Dominica nwere ihe ịga nke ọma na njikwa COVID
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Dominica njem ozi » Dominica nwere ihe ịga nke ọma na njikwa COVID
Dominica meriri mgbasa nke COVID-19 nye ndị bi na ndị ọbịa
Ọnọdụ COVID nke Dominica dị obere, na-achịkwa nke ọma yana opekata mpe
Dominica ejirila nlezianya mejuputa usoro iwu mbata
Usoro Dominica's Safe in Nature na-elekwasị anya na ezumike yana ahụike na nchekwa
Maka obere agwaetiti Caribbean, Dominica ejiriwo nlezianya mejuputa usoro iwu mbata nke na-enye ndị njem ohere ịga leta ma nwee obi ụtọ n'àgwàetiti ahụ, ha niile na-akwụsị mgbasa nke COVID-19 na ndị bi na ndị ọbịa.
Site na nkwekọrita nke mbọ iji mee usoro iwu ahụike na nchekwa siri ike, nke usoro nlekọta ahụike kachasị ike, yana site na asambodo ndị gbara agwaetiti ahụ, okwu ikpe COVID nke Dominica adịla ala, na-achịkwa nke ọma yana opekata mpe. Ka ọ dị ugbu a, etinyere ọgwụ mgbochi 39% nke ndị mmadụ lekwasịrị anya ka draịvụ ahụ na-aga n'ihu n'ime obodo iji nweta ọnụọgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ ọgwụ mgbochi. Ruo ugbu a, 25% nke ọnụ ọgụgụ mmadụ dum ka a na-egbochi ọgwụ mgbochi. Obi dị m ụtọ na Dominica enwebeghị ọnwụ COVID metụtara, obodo ọ bụla agbasaghị.
Site na atụmatụ nke ọma, Dominica na-enye ndị ọbịa ohere ileta agwaetiti ahụ site na mmemme ya 'Nchekwa na Nature'. Branddị Nchekwa na Nature na-ekwe nkwa na ndị ọbịa si ebe dị elu na-aga Dominica nwere ahụmịhe jisiri ike na ụbọchị 5-7 niile ị rutere Dominica ma gụnye ahụmịhe ndị njem na-agụnye ala na njem njegharị na mmiri ma na-etinye agwa ahụike dị iche iche Ka Dominica. Ọ na-enye "ahụmịhe jisiri ike" n'ime ihe a na-akpọ "njem afụka" nke gụnyere ebe obibi, njem, ebe nkiri, spa, ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ọrụ mmiri nwere nke enyerela aka niile, na-ahụ na ndị ọbịa na-eche nche mgbe niile ma nabata ha mgbe ha na-edebe ihe ọcha na nchekwa ogbugba ndu. A ga-anwale ndị ọbịa si ebe nchekwa dị elu n'ụbọchị nke ise. Usoro ihe omume a gụnyere ọrụ nchekwa nke ndị niile enyere aka na Nchekwa Na Nature, nke ga-eduzi ndị ọbịa n'ogologo niile, gụnyere ịhazi oge, ịhazi ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na anwaleghị na saịtị ahụ, onye nnabata ahụ ga-ahazi mbufe ahụ. A na-eweghachi nsonaazụ ule ugbu a n'ime awa 5-24 iji rube isi na-awa 48.
Na mgbakwunye, ndị World Travel na Tourism Council enyegola agwaetiti a Safe Travels Stamp nke na-emesi obi ike na usoro nlekọta ahụike na nchekwa nke ebe a na-agbaso ụkpụrụ ụwa nabatara. Dominica na-enyekwa ndị ọbịa ọrụ ọrụ na Nature gbatịkwuru usoro visa maka ndị chọrọ ịnọ Dominican ruo ọnwa 18.
Dominica si Nchekwa na Nature mmemme a na-elekwasị anya na ezumike yana ahụike na nchekwa, ngwakọta kachasị maka ndị na-achọ ezumike. Dominica na-enye ndị ọbịa ya mmiri mmiri a ma ama n'ụwa, ebe nrụọrụ zoro ezo na ebe nkiri zuru oke maka ịpụpụ, njem dị elu nke klas, site na mgbapụ ịhụnanya ihunanya, ndị amaala obodo Kalinago, nri siri ike ma dị ụtọ iji bulie ọgụ gị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Dominica abụghị naanị ezumike, mana nchọpụta na njem na Dominica karịsịa ugbu a, nwere ike ịgbanwe ma gbanwee. Ọ bụrụ n ’ị n’achọ iwepụ nchegbu gị na ịgbanye mmanụ maka agụụ gị, elepụla anya n’agwaetiti Dominica, ebe ndị mmadụ na-ejupụ na njem nchebe.
Air Force One na-aga supersonic
Norwegian Cruise Line laghachi Belize na August
Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa